Flekosteel gel nweta na Bauchi na mbelata
Flekosteel na Bauchi Naijiria
Zụrụ Flekosteel maka mgbu nkwonkwo na Bauchi
Gel megide nkwonkwo na mgbu azụ Flekosteel ga-eme ka mmụghachi nke anụ ahụ cartilage ngwa ngwa. Ị nwere ike ịzụta gel na obodo Nigeria na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Ị nwekwara ike ịtụ nnyefe na Bauchi. Ọnụ ego mbelata bụ naanị ₦14990, nkwalite ahụ nwere oke.
Iji zụta ọgwụ ugbu a na ọnụ ala dị ala, ịkwesịrị dejupụta mpempe akwụkwọ na webụsaịtị ụlọ ọrụ. Ọ chọrọ itinye nọmba ekwentị na aha gị n'ụdị usoro, onye njikwa ụlọ ọrụ anyị ga-akpọ gị ka ị nye iwu wee zaa ajụjụ gị niile na ọchịchọ gị na nnyefe. Tupu ịtụ ahịa, anyị na-akwado ka ị mụọ ntuziaka maka ojiji Flekosteel. Ị nwere ike iburu ngwugwu ahụ na post ọfịs ma ọ bụ onye ozi ga-ebuga ya n'ụlọ gị. Ịkwụ ụgwọ mgbe ị natachara aka.
Otu esi azụta na Bauchi Flekosteel
Nye iwu gel megide mgbu na nkwonkwo na azụ Flekosteel na Bauchi
Ọtụtụ nwere mmasị na ebe ị nwere ike ịzụta Flekosteel gel maka nkwonkwo na azụ na ọnụ ahịa ọnụ ahịa? Enweghị ike ịchọta gel na counters nke ụlọ ahịa ọgwụ na-anọghị n'ịntanetị na Bauchi, yana na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ọgwụ. Ọ ga-ekwe omume ịzụta ọgwụ naanị na webụsaịtị gọọmentị nke onye nrụpụta, dejupụta mpempe akwụkwọ ka onye ọrụ anyị wee kpọtụrụ gị. Taa enwere mbelata, ọnụahịa ngwaahịa ahụ bụ naanị ₦14990, ọnụ ahịa nnyefe na Bauchi (na Nigeria), lelee onye ọrụ.
Ị na-ahapụ arịrịọ na weebụsaịtị anyị iji kwado ịzụrụ gel.
Chere onye ọrụ ka ọ kpọọ, onye ga-akọwa nkọwa nke usoro ahụ wee kwado adreesị nnyefe.
Ọnụahịa maka izipu ngwugwu dabere na obodo ahụ. Mgbe onye njikwa ahụ kpọchara, chere maka ngwugwu ahụ ma kwụọ ụgwọ ngwa ahịa mgbe ị natara ya. Na-akwụ ụgwọ naanị mgbe ị nwetasịrị ngwugwu ahụ, ọ ga-ekwe omume iji aka ma ọ bụ kaadị kwụọ onye na-ebufe ya. Nkwalite! Zụta 50% kwụsịrị. Ị nwere ike ịtụ ngwongwo na Bauchi (Nigeria) ugbu a.
Flekosteel n'Abuja Flekosteel na Lagos
Flekosteel na Kano Flekosteel na Port Harcourt
Flekosteel na Benin City Flekosteel na Kaduna
Flekosteel na Owerri Flekosteel na Acker
Flekosteel na Warri Flekosteel na Calabar
Flekosteel na Sokoto Flekosteel n'Enugwu
Flekosteel na Jos Flekosteel na ABA
Flekosteel na Abeokuta Flekosteel na Ajaokuta
Flekosteel na Apapa Flekosteel na Bakhit
Azụ mgbu na mpaghara lumbar. Otu esi emeso ma ọ bụrụ na ọ na-enye na ụkwụ. Injections, ointments, ndị mmadụ ịgba akwụkwọ
Otu esi emeso ma ọ bụrụ na azụ na-afụ ụfụ na mpaghara lumbar ma nye ya ụkwụ. Ihe nwere ike ime ihe mgbu na ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke. Ụzọ ọgwụgwọ dị irè: injections, ointments, ọgwụgwọ ndị mmadụ, ọgwụ. Mgbochi mgbu azụ.
7 Eprel 2022
Mkpịsị aka na-afụ ụfụ: gịnị ka a ga-eme?
Mkpịsị aka na-afụ ụfụ na ogbu na nkwonkwo, arthrosis na gout. Mgbe mkpịsị aka na-emerụ ahụ, a na-atụ aro chondroprotectors. Maka mgbu na nkwonkwo aka, ịkwesịrị ịkpọtụrụ onye na-ahụ maka ọrịa ogbu na nkwonkwo.
20 Maachị 2022
ịtụ ịtụ Flekosteel na Bauchi 50% nke ọ bụla